अदालतले जुलुस हेरेर निर्णय नगर्न र आयोग चुनाव गराउन तयार हुन सभापति देउवाको आग्रह - 24/7 समाचार
Home / Featured / अदालतले जुलुस हेरेर निर्णय नगर्न र आयोग चुनाव गराउन तयार हुन सभापति देउवाको आग्रह
भैरहवा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतलाई जुलुस हेरेर निर्णय नगर्न र निर्वाचन आयोगलाई जुनसुकैवेला चुनाव गराउन तयार रहन आग्रह गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेस रुपन्देही जिल्ला समितीद्धारा सोमवार भैरहवामा आयोजित विरोधसभामा देउवाले उक्त कुरा बताएका हुन।
निर्वाचन आयोगको कार्यशैलिमा आशंका गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने। ‘आयोगले अझसम्म किन निर्वाचनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दैन ? सुर्य चिन्हको झगडामा किन अल्झीन्छ?’
‘एउटै चिन्ह दुईटा पार्टीलाई दिन मिल्दैन, विवाद देखिएपछि सुर्य चिन्ह कसैलाई नदिई अरु नै चिन्ह दिए भै हाल्यो नि।’ उनले भने। ‘निर्वाचन आयोगले अदालतको निर्णय पर्खने होईन, राजनैतिक दलहरुलाई बोलाएर चुनाव चिन्ह दिने र निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडी बढाउने हो। चुनाव गराउने हो।’
संसद विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्छ। निर्वाचन आयोगलाई मतलव छैन। वेलायत, फ्रान्स र युरोपेली मुलुकहरु जुनसुकै वेला निर्वाचन गराउन तयार हुन्छन।
तर अमेरीकामा भने ४/४ वर्षमा मात्रै चुनाव हुन्छ। आयोगले संसद पुनस्थापन भएन भने वैशाखमा नसके जेठमा चुनाव गराउनै पर्छ।
आयोग स्वतन्त्र छ। आयोगले अदालतको निर्णय कुर्दा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुन्छ, बैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन। यदि संसद पुनस्थापन भईहाल्यो भने निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगीत गरे हन्छ नी ? उनको कथन थियो।
काँग्रेसले अदालतको जुनसुकै निर्णय चाहे संसद पुनस्थापना वा निर्वाचनमा जाने कुरा दुवै मान्न तयार रहेको बताउदैं उनले भने। ‘काँग्रेसले यो वा ऊ हुनुपर्छ भन्दैन।
अदालतले जुलुस हेरेर निर्णय गर्नेकाम नगरोस, अदालतले बुझन वकील राख्ने हो, जुरिसियल छ। अदालत कोही कसैबाट प्रभावित नभई संविधानसम्वतढंगले निर्णय गरोस भन्ने काग्रेसको चाहना छ।’
कम्युनिष्टको झगडाले काँग्रेस पार्टीमा समेत अफठारो परेको उनले बताए। हामीले उनीहरुको झगडा गराएको होईन। आफै झगडा गरेका छन्।
यसैगरी नेपाली काग्रेसका संचेतक एवं केन्द्रिय सदस्य बालकृष्ण खाणले ओली सरकारले संविधानको भावना एवं मर्ममाथि निरन्तर प्रहार गरीरहेको र संसद विघटनपूर्व स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन मिडिया विधेयक ल्याएको बताए।
यसैैगरी अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको मुल्य र मान्यता विपरीत मानव अधिकार आयोगमा अर्को विधेयक ल्याउने काम गरे।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैंठक वस्न नपाए प्रधानमन्त्रीले स्वच्छाले सेना चलाउन सक्ने विद्येयक ल्याएको र ती सवै विद्येयकहरुलाई सदनमा पास गर्न नदिएको घटनाहरु औलाए।
मधेशी, मुस्लीम, आदिवासी जनजातिलाई राष्ट्रद्रोही भन्ने ओली स्वम आफै राष्ट्रद्रोही भएको आरोप लगाए।
उक्त सभामा अर्थ समिती संयोजक भरतकुमार शाह, निर्वतमान सांसद प्रमोद कुमार यादव, प्रदेससभासद रमा अर्याल, क्षेत्रिय सभापति मातृका प्रसाद यादव, नेविसंघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष मुक्ती पौडेल, सिद्धार्थनगरका सभापति दीलिप धिताल, जिल्ला सचिव रामकृष्ण खाणलगायतले धारणा राखेका थिए।
उक्त कार्यक्रममा सभापति देउवाले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी काग्रेस प्रवेशीलाई टिका र फुलमालाले स्वागत गरेका थिए।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतपुस ५ गते प्रतिनिधीसभा विघटन गरेको विरोधमा काग्रेसले सोमबार देशभरका ७७ वटैं जिल्लामा प्रदर्शन र जनसभा गरेको छ।
Previous सैनामैना डिभिजन ‘ए’ मा प्रवेश
Next प्रहरी विनम्र हुने तर कमजोर नहुने : आईजीपी शैलेश थापा